Alpines - ewu ewu oge ochie - Agba ewu - 2019
Alpine ewu ìgwè
Azụ ewu ewu Alpine bụ ụdị ochie. E wepụrụ ya na cantons nke Switzerland. Ruo ogologo oge, ewu ndị a na-ebi nanị n'ebe ịta nri alpine (nke a bụ ebe e si akọwa aha aha ahụ). N'afọ iri abụọ nke iri abụọ na narị afọ abụọ, ìgwè a gbasaa n'ókèala Ịtali, France na United States, ebe, n'eziokwu, ọ nwetara nnukwu ewu ewu ya.
Azụ ewu Alpine nwere mmetụta dị ukwuu n'inwe ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ya mere, na mba dị iche iche, n'ihi nsị nke ụdị nke a na mpaghara, Oberhazlis, ugwu Alpine, Swiss Alpine, American, British na French ama na-emepụta ewu ewu.
6. Nhazi ozuzu
N'ebe dị anya, ìgwè Alpine dị nnọọ ukwuu ma e jiri ya tụnyere nha ndị ọzọ. Alpines nwere ụdị dịgasị iche iche: site na isi awọ na agba aja aja, na site na ọcha ruo oji.
N'ihe banyere agba agba n'ozuzu, enwere ike ịsị na aka na ikpere, afọ ala, mkpịsị aka na ntị nwere ọchịchịrị. Oge dị ogologo dịka ihe ịrịba ama nke ụdị ahụ nwere ike ịbụ agba ọ bụla, mana n'oge a, dị iche na nke toggenburg na-acha ọcha na Saanen, agba nke Alpine agbanweela kpamkpam.
Ọ bụ ezie na ìgwè ahụ dị nnọọ ukwuu, ọ dị mma ma nwee nnukwu iwu. Ibu ewu na akpọnwụ bụ 66-76 cm, ewu bụ 79-86 cm Isi ya dị mkpụmkpụ na ìhè, mpi ndị ahụ dị mma ma dị mma. Ihe profaịlụ bu uzo, nti na-eguzo ọtọ ma kwụ ọtọ. Uwa na ikpo ọkụ, obi dị ala, olu olu, azụ azụ na sacrum warara - isi ihe dị iche iche nke ọdịdị nke ụdị a.
Ahịhịa Alpine nwere akụkụ dị mkpụmkpụ na mkpụmkpụ, nke nwere ike iyi ihe dị egwu. Ma, kama nke ahụ, ha na-anọgidesi ike, ndị siri ike, ndị dị nro ma na-agbanwe n'ime, siri ike site n'èzí. Ọtụtụ n'ime ewu ndị a nwere ntutu dị mkpụmkpụ, ọ bụ ezie na ha dị ogologo na azụ na azụ.
Ụdị a dị nnọọ nro, na n'ọnọdụ nkịtị, ọ nwere ike ịmepụta ụmụaka anọ na otu ebe. Akụkụ bụ isi nke alpine ewu bụ ikike ha nwere imeghari na ebe ọ bụla na ọnọdụ dị iche iche nke ihu igwe. Ụdị ewu bụ "dị mfe," dịka ha na-enwe ezigbo enyi ma na-anabata ndị nwe ha. Otú ọ dị, n'ihe gbasara ụdị na ụdị ndị ọzọ, ha na-agbalị ịbụ ndị ka elu ma na-achịkwa ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ikwu na Alpines agaghị agwụ.
Azụ ewu Alpine dị iche iche na-egosi na ọ bụghị ihe oriri na-edozi ahụ. A pụkwara ikwu otu ihe banyere ọdịnaya nke ìgwè a, n'ihi na ha na-agbanyeghị ụdị ọnọdụ ha bi na otú onye ọbịa si bụrụ nke ha.
Isi na otu n'ime ihe ndapụta dị ịrịba ama nke ìgwè Alpine bụ ego ya na itinye ego. Na onye nwe ya, o nwere obi oma ma di nwayo, ma dika ndi ozo si di.
N'ihi omume ha iji chịkwaa ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ na ìgwè ehi, ha nwere ike na-eri anụ ndị ọzọ. N'okwu ndị siri ike, na-enupụrụ ha isi site na ewu ndị ọzọ, ha nwere ike ịchụpụ ha na trough ma jiri ha mpi ha weghachite ha.
Akụkụ bụ isi nke ụdị a bụ njupụta ya. Akwukwo ndi ozo na enweghi ihe omuma banyere onu ogugu, n'ihi na ha nwere otutu mmiri ara ehi, nke na ewusi ike ya n'adighi nma. Ya mere alpines onwe ha nwere ezi data na ohere maka ịmị mkpụrụebe ha na-ebute n'ụzọ ziri ezi n'ọkwá dị elu maka mmekọrịta ndị ọzọ.
Tinyere atụmatụ ndị a, alpines bụ ihe atụ magburu onwe ya maka imezi ma melite ụdị ụmụ ewu ndị ọzọ. N'oge ọ bụla a na-azụlite ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere mgbanwe n'ọnọdụ ebe arụpụta ihe (mmụba na abụba na mmiri ara ehi), nakwa na mpaghara nke ọmụmụ (ọ bụrụ na tupu otu nwa ebuo nwere otu ewu, ya mere site na nhọrọ onye ahọrọ ahọrọ inye mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ndozi).
Azụ ewu Alpine na-arụ ọrụ dị mma n'ọhịa nke arụ ọrụ ara ehi. Otu ewu buru ibu nwere ibu nke 60-64 n'arọ, na ewu - 75-80 n'arọ. Ebe ọ bụ na ewu dị ọtụtụ-na-amụba, ruo ụmụaka anọ nwere ike ịbata n'otu ewu. E nwekwara nnukwu mmiri ozuzo dị elu: maka otu lactation, nke dị ihe dị ka ụbọchị 315, i nwere ike ịrụpụta ihe 750-1000 n'arọ. Ọ bụrụ na ewu ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma, ọ nwere nri dị mma, mgbe ahụ, mmiri ara ehi nwere ike iru na mmiri 1600 nke mmiri ara ehi.
A na-edekọ mkpụrụ mmiri ara ehi nke mmiri ara ehi na United States ma nweta ihe dị ka 2215 kg nke mmiri ara ehi. Nke a bụ nnọọ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke na-ahapụ ọtụtụ ndị ọzọ na-arụpụta nri ara ehi na-arụpụta.
Agụba nke mmiri ara ehi na-adabere na ọnọdụ nke ewu. Ya mere, pasent nke ọdịnaya abụba nwere ike ịdị iche site na 3.5 ruo 5.5%. Mmiri ara ehi nwere ezigbo ekpomeekpo. Ọ bụ ya mere ọ na-ejikarị eme ụdị cheese dị iche iche. Nri arụ ọrụ na-enye afọ ojuju.
Mmiri ara ehi kwa ụbọchị na-erute 8 n'arọ nke mmiri ara ehi. Na mgbakwunye na 5.5% abụba ọdịnaya, mmiri ara ehi dị n'ụdị dị iche iche nwere ike ịnwe protein protein 4%, nke bụkwa ihe ngosi dị elu.
Ebe ọ bụ na ụdị a nwere àgwà mara mma na onye ọbịa, ọ gaghị esiri ike ịchọta asụsụ nkịtị. Otu ihe a na-emetụtakwa ikike o nwere ime mgbanwe maka ọnọdụ dị iche iche ejidere na mpaghara dị iche iche. Ọ bụ ya mere alpines ji nwee ntachi obi dị mma maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche.
A na-enye ụmụ ewu alpine otu ụzọ dịka ewu ewu. Ma e nwere ihe ọzọ dị iche iche dị iche iche nke dị oké mkpa maka mmepụta nke ụdị a: mmiri. Ịṅụ mmanya bụ isi ngwá ọrụ nke nna ukwu na-emepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ mmiri ara ehi nke ọma. Ọ bụ ya mere ha ji achọ oge ka ha ṅụọ mmiri karịa mmiri ewu ndị ọzọ dị elu.
Maka ịga ije na alpine ewu na-enye mmasị n'ugwu ugwu, na karịsịa kpọmkwem - nnukwu ebe ịta nri. Site na ịzụlite nke Alpine ìgwè ọ bụla obere novice nwere ike ịnagide.
Tinyere àgwà nile nke ụdị a, a pụrụ ikwu na ịzụlite ha bụ azụmahịa dị mma na nke bara uru. Ee, ụgwọ mbụ ha dị ukwuu, nke gosipụtara onwe ha na ego nke ewu. Ma o sina dị, n'ọdịnihu dị nso, ha nile ga-akwụ ụgwọ ma nwee ike iweta oke ego.
Ịgafe ewu na ụdị ndị ọzọ ga-eweta ụmụ magburu onwe ha, nke na-akarị nne na nna ha. Ọ bụ "nsị" nke na-enye ohere iji nweta ụmụ na-amị mkpụrụ.
N'ikwekọ n'àgwà nile nke ụdị ewu ewu Alpine, a pụrụ ikwu ya n'eji obi ike na ọ ga-eburu otu n'ime ebe kachasị elu n'etiti ewu ewu. Nri kwesịrị ekwesị, nlekọta kwesịrị ekwesị (site na nke a ka anyị na-egosi obiọma, ọmịiko na nlekọta na njikọta), nkwubi okwu ugboro ugboro n'elu ebe ịta nri nke ugwu, ga-eweta nsonaazụ kachasị elu, ma mkpụrụ nke mkpụrụ osisi na ụmụ ụmụ, nakwa n'ọhịa nke ịmịpụta mmiri ọma.
Nke kachasị dị na German Chickens - Ostfriz Gull
Ọ ga-ekwe omume iri nri na ihe ndị bara uru nke mkpụrụ osisi irgi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Alpine ewu ìgwè